Fampianarana hamoronana fanasana Halloween | Famoronana an-tserasera
Miguel Gaton | | Graphic Design, Photoshop
Amin'ny 31 Oktobra dia tsy ny olona any Etazonia ihany no ho voasariky ny horohoro; eto koa, hiantsoantso izy ireo hoe "Mamitaka sa mitsabo?" ny fety fety miha malaza isan-taona izy io, indrindra ny ankizy. Saingy mihamaro ihany koa ny olon-dehibe mankafy ny filan'ny horohoro ary miakanjo toy ny vampira, werewolf, mpamosavy na zombie ... tsy misy fetra amin'ny nofinofy mahatsiravina. Ireo izay te-handamina ny fety Halloween azy manokana ihany koa dia afaka mifandray manokana fanasana Halloween namboarina ao an-trano. Ity misy ity fampianarana ity izay niara-niasa OvernightPrints.es!
Amin'ity lesona ity dia hasehontsika anao tsikelikely ny fomba ahafahanao manao a karatra Halloween.
4 Dingana 4
5 Dingana 5
6 Dingana 6
7 Dingana 7
8 Dingana 8
9 Dingana 9
10 Dingana 10
11 Dingana 11
12 Dingana 12
13 Dingana 13
14 Dingana 14
15 Dingana 15
16 Dingana 16
17 Dingana 17
18 Dingana 18
Manoro hevitra izahay ampiasao ny programa fanovana sary Photoshop feno hamorona karatra Halloween anao manokana. Mba hanombohana ny tetikasa mampatahotra dia mandehana any amin'ny "File"> "Vaovao" ary safidio ny endrika DIN A6 mitsangana. Mba hahazoan'ny karatrao ny vokatra irina dia manoro hevitra anao izahay hisafidy vahaolana 300 dpi. Hanatratra valiny fanontana tsara indrindra izany. HO AN'NY manome rivotra fararano ny endrika, tsindrio ny fitambarana fanalahidy "Shift + Ctrl + N" ary safidio ny gradientan'ny loko # e6cca0 - #ffffff ho any aoriana. Mazava ho azy fa afaka misafidy loko hafa ankafizinao koa ianao.
Inona no antony manosika indrindra mety amin'ny Halloween? Mazava ho azy fa ny voatavo! Mba hamoronana azy dia safidio ny fitaovana «Anchor point». Ankehitriny ianao dia afaka manamboatra voatavo amin'ny maodelinao araka ny fanirianao manokana. Raha toa be sy matanjaka izy io, dia io no antony manosika ny karatra Halloween kasainao hamboarina.
Para omeo loko voatavo matanjaka kokoa ny voatavo, kitiho indroa ny sosona miaraka amin'ny "Pumpkin Path" ary ampio fomba vaovao. Ho an'izay, safidio ny maody "Radial Gradient" ho "Gradient" amin'ny menio manodidina. Manoro hevitra izahay hampiasa ny loko volomboasary mahery # 79e21- # f37c24.
Izao dia momba velomy ny voatavo. Ampiasao indray ny fitaovana "Anchor Point" ary manorata faribolana maromaro amin'ny voatavo. Ny tsipika dia tsy tokony ho tonga lafatra amin'ny lafiny rehetra - arakaraka ny maha kely azy ireo no maha voajanahary kokoa ny valiny amin'ny farany.
Ireo tsipika nalaina tamina «Teboka« manoritra »dia manamboatra sosona vaovao izay ankehitriny miavaka amin'ny loko hafa. Tsindrio ny "Shift + Ctrl + N" ary ampio sosona vaovao. Ampiasao avy eo ny fitaovana "Brush" miaraka amin'ilay endrika teboka "Soft Round" ary savaivony 100 px. Manoro hevitra loko mavo mavo izahay handokoana: # d8530e. Ankehitriny ianao dia afaka manoritra amin'ny borosy amin'ilay sosona vao noforonina. Avy eo ianao dia afaka misafidy ny "Eraser" ary hamafana kely ny zoro ambony sy ambany. Efa nomen'izy ireo rafitra miloko manaitra ny sosona voalohany amin'ny voatavo.
Amin'ity dingana ity dia tokony avereno fotsiny ny dingana 5 imbetsaka mandra-pahazoanao voatavo misy endrika. Farany, azonao atao ny mamolavola ny sosona rehetra amin'ny alàlan'ny fitaovana "Mifindra".
Avy eo ianao dia afaka manome ny voatavo ny mahasarika Halloween mahazatra mitafy satroka mpamosavy. Ampiasao indray ny fitaovana "Anchor Point" ho an'izay, ary safidio ny loko # 031924 izay mainty lalina. Ankehitriny ianao dia afaka mamoaka ny fahaizanao mamorona majia hamoronana satroka mpamosavy.
Para afindra ny satroka amin'ny toerana marina tsy maintsy alamina ho toy ny sosona tsirairay izy io. Tazomy ny bokotra "Ctrl" ary kitiho ny sosona miaraka amin'ny satroka hamoronana safidy vaovao. Manampia sosona vaovao izao. Miaraka amin'ny «Brush» fitaovana ary opacity 50%, azonao atao ny mandoko ny faritra maizina sy maivana amin'ny loko mainty sy fotsy.
Mba hanomezana ny satroka ny famitana farany azonao atao asio kofehy mena tsara. Miverena any amin'ny "Anchor Point" ary mifidiana loko mena midorehitra: # 720b02. Avy eo sariho manodidina ny satroka mpamosavy ny fatorana. Avy eo tsindrio indroa ny sosona noforonina ary ampio aloka ivelany sy anatiny mampiasa ny loko fotsy.
Handravaka ny satroka mpamosavy azonao atao apetraho eo amboniny ny buckle volamena. Amin'ity tranga ity dia mila mampiasa ny Anchor Point »isika hanoritana kianja tsy ara-dalàna. Mba hahatonga ny lavaka ho eo afovoany dia safidio ny teboka "Safidy Fitaovana" ao amin'ny tsipika menio ary safidio ny teboka "Esory" ao amin'ny maody fitaovana.
Amin'ny dingana manaraka, kitiho indroa ny sosona "buckle" ary ampio ny effet "Drop Shadow" izay hitanao eo ambanin'ny menio "Add Effects". Fenoy ny safidin'i "Inner Glow" sy "Gradient Overlay". Amin'izany fomba izany dia tratra buckle volamena saika tena izy ary ny satrokanao mpamosavy dia ho fampisehoana iray.
Avy eo dia mila miatrika ny kasety indray ianao. Afaka mandroso toy ny amin'ny dingana 8 ianao ary mamorona sosona vaovao eo an-tampon'ny kofehy. afaka ampio indray ny aloka sy ny hamirapiratra.
Para omeo endrika plastika kokoa ilay satroka mpamosavy, zava-dehibe ny mamorona aloka eo ambanin'ny satroka. Ho an'izay dia mila miroso fotsiny ianao toy izao manaraka izao: asio sosona vaovao, afindra ao ambanin'ny satroka ny sosona. Tsindrio ity sosona ity ary mamorona safidy vaovao amin'ny alàlan'ny fitaovana "Elliptical Marquee". Azonao atao ny manova ny safidinao amin'ny alàlan'ny "Selection"> "Edit"> safidio ny "Smooth edge" ary hiditra eo anelanelan'ny 5 sy 10px. Fenoy loko mainty toy izao ny safidy: Amboary> Fenoy ambonin'ilay faritra.
Izao dia momba mamorona ny aloka ho an'ny voatavo iray manontolo. Avereno fotsiny ny dingana 13 ho an'izany, fa amin'ity indray mitoraka ity dia mila fenoy gradient loko fotsiny izay mety ho ity: manomboka amin'ny mainty ka hatramin'ny mangarahara.
Mba hanomezana alokaloka ny alokaloka izay manasongadina bebe kokoa fa tsy amin'ny Halloween isika apetaho ity sosona ity. Midira ao amin'ny menio "Sivana" mankany amin'ny "Smoothing Filters" ary safidio ny "Gaussian Blur".
Voatavo Halloween tsy mety tsy misy tarehy! Safidio indray ilay fitaovana "Anchor Point" ho volavola ny maso, orona ary vava. Eto isika dia afaka misafidy na voatavo tezitra, mampihomehy na mampatahotra.
Ary farany, momba ilay izy poloney ny asa amin'ny alàlan'ny fandavorariana ireo singa vao tafiditra misy vokany manaitra. Ohatra, kitiho indroa ny maso hanokafana ny fomban'ny sosona, safidio izao ny "Inner Shadow" ary farito: miaraka amin'ny halaviran'ny 25 px, ny haben'ny 0px ary ny jiro ivelany. Hahazo ny valiny tsara indrindra ianao amin'ny alàlan'ny fametrahana ny loko # feef00 sy ny rakotra gradient miorina amin'ny gradient loko # 851402- # b42603. Avy eo dia mila maka tahaka an'io sosona io ianao mba hanondroana ny orona sy ny vava ary ny voatavo Halloween dia vonona ny hanonta.
Ny fampiasana ny safidy «Add text» dia azonao atao ihany koa mamorona teny filamatra Halloween tany am-boalohany ary alefaso amin'ny OvernightPrints ilay tetikasa. Ary efa vonona ianareo rehetra, handefa anao ny fanasana anao ara-potoana amin'ny fety.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Tutorial momba ny famoronana fanasana Halloween mampatahotra
Landscape nolokoana tamin'ny hazo i Alison Moritsugu